Abasebenzisi be-IPhone 13 babika amaphutha lapho bevula nge-Apple Watch | Izindaba ze-IPhone
Abasebenzisi be-IPhone 13 babika amaphutha ngokuvula i-Apple Watch
U-Angel Gonzalez | 25/09/2021 18:00 | iPhone 13, Izaziso
Ukufika kwe Covid-19 silethe izinguquko eziningi empilweni yethu yansuku zonke. Esinye sazo yisifihla-buso ebesikithi selokhu kwaqala ubhadane. Kodwa-ke, le nsiza ikhawulele ezinye zezenzo ebesivame ukuzenza nsuku zonke, njenge ukuvula i-iPhone yethu nge-Face ID. Ngo-Ephreli, i-Apple yethule uhlelo lokuvula nge-Apple Watch ngokudlula i-Face ID isebenzisa uhlelo lwesibili lokuqinisekisa. Abasebenzisi be-iPhone 13 entsha babika izinkinga lapho besebenzisa lo msebenzi futhi i-Apple kuzodingeka ikhiphe isibuyekezo maduze ukuyilungisa.
Amaphutha wokuvula i-iPhone 13 nge-Apple Watch
Vula i-iPhone nge-Apple Watch lapho ugqoke isikhumba. Uma ugqoke imaski ne-Apple Watch, ungaphakamisa ubheke i-iPhone ukuyivula. Funda ukuthi ungasetha kanjani futhi usebenzise lesi sici.
Inhloso yalokhu ukuvula uhlelo bekucacile: gwema ukusebenzisa i-Face ID ukuvula ukuphela. Ngenxa yalokhu, i-Apple bekufanele ibe nohlelo lokuphepha lwangaphandle ukuqinisekisa ukuthi yithina esizovula i-iPhone. Futhi yilapho i-Apple Watch ingene khona ethola isaziso lapho izama ukuvula idivayisi. Ngemuva kokuqinisekisa, sifinyelela entwasahlobo ngaphandle kokukhipha imaski.
Emahoreni okugcina abasebenzisi be-iPhone 13 entsha banenkinga yokusebenzisa lesi sici. Lapho bezama ukuvula nge-Apple Watch bathola umyalezo wephutha:
Ayikwazi ukuxhumana ne-Apple Watch. Qiniseka ukuthi i-Apple Watch ivuliwe nasesihlakaleni sakho, kanti ne-iPhone ayakhiyiwe.
Ungayivula kanjani i-iPhone yakho ngesifihla-buso ne-Apple Watch
Ngokusebenzisa Reddit abanye abasebenzisi bakwazile ukuqonda isizathu saleli phutha. I-iPhone 13 kuthiwa ikhiqiza ukhiye wokuvula lapho inqubo iqala futhi ithunyelwa ku-Apple Watch ukuvula i-terminal isebenzisa leyo khiye. Noma kunjalo, leli phutha liphonswa ngoba I-iPhone 13 ayikwazi ukwenza ukhiye wayo wokuvula futhi umsebenzi ukhubazekile futhi ukuxhumana phakathi kwamadivayisi womabili akwenzeki.
I-Apple ingadinga ukukhipha inguqulo ebuyekeziwe ye-iOS 15 ukuxazulula le nkinga. Kungenzeka ukuthi uma i-Apple ibona ukuthi kufanele ixazululwe ngokushesha okukhulu, bazocubungula ukwethulwa kwe-iOS 15.0.1. Ngaphandle kwalokho, babezolinda inguqulo ye-iOS 15.1 eyayizobuyisa eminye imisebenzi efana ne-SharePlay esuswe ezigabeni zokugcina ze-betas kanjiniyela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Abasebenzisi be-IPhone 13 babika amaphutha ngokuvula i-Apple Watch
UDarth koul kusho
Nginenkinga efanayo. Bengivele ngilinde ukuvuselelwa.
Phendula uDarth Koul
Kwenzeka kimi nge-13 pro max
U-Esteban Gonzalez kusho
Ngempela, ngingomunye wabathintekile kule nkinga. Ngiyethemba bayayixazulula ngokushesha, akwamukelekile ukuthi lolu hlobo lokuphazamiseka lwenzeka kudivayisi yale ntengo.
Phendula u-Esteban González
Jesús R. kusho
Bayasihlanyisa. Konke ukudluliswa kuphelele, ngaphandle kwe-Movistar eSIM leyo
Baqhubeka bakwenza udlule ebhokisini, nokuvulwa ngesifihla-buso okusihlanyisayo.
Phendula uJesús R.
Ngiyixazulule ngokubuyisela i-iPhone nangemva kokuyibuyisela njenge-iPhone entsha nokulayisha isipele, konke lokhu kusizwe yi-Apple futhi kusebenza ngokujwayelekile kimi ngine-iPhone 13pro
Futhi ayingivumeli ukuthi ngiyilungiselele ukuvula iMac.Ngithola iphutha elifanayo.
Angizange ngishiye i-IPhone 13 futhi !!!! Ngizamile konke, buyisela, sula, setha kabusha amadivayisi womabili futhi anginalutho
Manje usungasetha isizinda sangokwezifiso ku-Safari